E kagburu Tour de France 2021? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Map de France - otu anyị ga-esi edozi
Map de France - otu anyị ga-esi edozi
E kagburu Tour de France 2021?
Site na asọmpi Olimpik azụ otu afọ n'ihi yankezuru ụwa ọnụ coronavirus oria ojoo, the2021 Tour de FranceA manyere ịgbanwee otu izu tupu oge iji gbochie yasite nana-agbagha ihe omume ahụn'imeTokyo.
>>> ANY ARE B B. >>> ANY ARE B B. 8: 13A M ugbu a, Akụkọ dị ịtụnanya gbasara egwuregwu Tokyo OLYMPIC anyị na-eso mgbe ọ bụla ụtụtụ, SAVANNAH. >> SHA'CARRI RICHARDSON, THEU.S. 100 METERS TI CHAMPION NA-AKWOMKWỌ ND IN NA-AH THE AKW THEKWỌ AKW THEKWỌ AHOLROL OLLỌ OLLỌ NT THEKWU FORBỌCH FOR NA-AKWOLKWỌ ​​MARIJUANA MGBE Ọsọ a.
Ndi nwere akwukwo akwukwo na ntukwasi obi na ihe nwere ike ibibi mkpebi siri ike maka ndị mmadụ meriri ọtụtụ nde mmadụ. >> NA-EBU EGO NA EGO, SHA'CARRI AKA SHA'CARRI BANYERE RICHARD KPỌRỌ, G WILLN WILL GA-AKWECKWỌ n'oge a OTTO RICHARD Abụ m onye Olympia. >> NA OLYMPIC ọnwụnwa, DALAS NWA 21-afọ-enweta 100-mita SPRAY IN Imeri 10,8 SECONDS, nke mere na ọ na-egosiputa Kachasị Nwaanyị na America tinye ONHOLD.A US OLYMPIC IHE NA-EGW DRTA A TGW DR IWU. NWANY,, NWALERE NA-EME THC, A NA-EME CHEMISTRY NA MARIJUANA NTUPU NT WTA AH W KWES AR A KWES IFR IF Ọ B IFR S NA A NA-EME YA ỌT PT..
Nke ahụ pụtara na ị gaghị esonye na mmemme gị, 100 METES, MA E NWERE ANBANANCE N'OLỌ N'THATLỌ N'THATLỌ N'THATLỌ NT THATKWU NDIF ỌDF D RE ICHE ICHE NA-ECHICHE NA-ECHICHE NA-ECHICHE, SHA'ARARAR NA-AKA. MGBE HA RUR IN N'OBI-EGO NA-EGO NNA NNA NILE AFỌ NT >R HAVE> AH M. N'AFU A BU NIILE. NAANY I FUFE NNE M Organi N’izu Ikpeazu Ma Anyi Di Ebe A. >> NA MGBE a mara gị ezighi ọgwụ ule, RICHARDSON TWETA ụnyaahụ, m ndị mmadụ bịara SAVAR'C. >> UGBU A KA US.ỌT MTOR ORT,, SHA'CARRI.Achọrọ m naanị ịjụ otu ajụjụ dị mfe.HOWARE DETERMINE? >> A gọziri m ka m dịrị ndụ.
Ọ BỤ YA. >> Nke ahụ adịghị mfe. Nke a bụ oge siri ike, na ị dị ugbu a.
ANA M EKELI M N FOR BE B BE. AMA MA NA M NA TELLYOUR HISTORY. I GWARA M NA I MAARA Ihe na-eduga n’ule a di ezigbo nma. >> NAAN J, Ezi obi, Achọrọ m ka anyị omume M mara ihe m mara ihe m kwesịrị ime ihe m na-agaghị eme na-eme nke a mkpebi.
MA NA-Achọ Mkpebi ma ọ bụ mmetọ na ọnọdụ m kama ọ bụ naanị na ọnọdụ a nke ndụ m, iji chọpụta ihe m ga-ekwu banyere PROBA A B TH Ihe kachasị mma na-ada na MEPOSITIVE, NA-AH ME, NA-AH NE. NA-EME NKP WITHR WITH M NA NNE. NKE DI N’Ezie, EGO N’AKA M KWES MER ME M.
ND PEOPLE mmadu anaghị aghọtakwa ihe ọ ga - abụ - ma ọ bụ ndị mmadụ na - eme. ANY ALL NIILE NILE NKE DI ICHE ICHE. ANY ALL niile nwere ihe dị iche iche na-abịanụ ka anyị wee nwee ihu ihu, mee ka ihu gị kpuchie ihu m, amataghị onye ị bụ ma ọ bụ onye m na-agwa gị otu ị ga-esi nweta ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu, na ị ND ARE NA-EBU ND THAT NA-EBUGH THAT AH OR MA Ọ B THAT NA YOU NA-ECHEBEGH YOU NA YOU GA-EME, WHOnye ka m ga-agwa gị otu esi eji ya? G WHON AM B I M KA YOU NA-EBU TOZỌ IMEJU? Echere m n'eziokwu, na-adụ gị ọdụ ka ị gwọọ ahụike m, na-eduga n'egwuregwu, oge niile na-enweta n'okporo ụzọ, na-atụ anya oge mmebi ma ọ bụ ihe ọ bụla ga-abụ, naanị na onye edemede, ọ bụ naanị na onwe gị ihe mbụ m. NKWUKWOFKWOFKWOFKW PRKWOFKWỌ ND, ỌR,, AKW MYKWỌ AKW PRKWỌ M BIRI NA TEMISYEAR nke P.
NA I KPUTA IHE A NIILE NA MYAGENT, NDON NA-EME M, NKWU ND MY M, ND, NA-EZINOWL KN M, MARA - N SH-- >> SHA’CARRI VER, Achọrọ m, Naanị N’izu Ndị Ahụ Na-abịa. GWARA M Ọ B IFR THIS na nke a bụ eziokwu. Ma ọ bụ ụbọchị ole na ole tupu agbụrụ gị na ule.
HA KWES THATR THAT NA E Chefurula nne ha na-arụ ọrụ. Ha kwusara ya mgbe onye nta akụkọ gwara gị. NA I B TLA Adị MARIJUANA.
Ekwesịrị m icheta na unu nọ INOREGON. Ọ BEG Iwu na Oregon. Ma ọ bụ megide iwu nke egwuregwu gị, NA D THEY KA HA KWURU, HA MARA NA.
KAMA Ọ B THAT Ihe ahụ mere? D THAT KA Ọ B HR TO CBỌR?? >> N'EZIOKWU, EE, nke ahụ bụ akụkọ m kụrụ na MYAGENT. Amaara m na m nwere ajụjụ ọnụ. II KWESUSR TH NA-ECHICHE Ọ BTER ỌD IN NILE AJORJ..
NA EYI NU AJ ANJ THAT N'THATLỌ AJ THAT N'THATLỌ AKA NA-ECHICHE NA-ECHICHE B FROM N'RLỌ ỌZỌ, M KWESITREF KWES ,R, KWES ,ROC, Ọ B SH NA-EWU. Naanị na ọ na-arụ ọrụ ya. MA DEF KA O doro anya, Nke ahụ mere ka m kwenye, na steeti nke mmetụta uche, ọ bụrụ na ihe ọ bụla ma mara nke a bụ - Ọ B IFR IF na m nọ ebe a, m ga-arụ ọrụ maka nrọ m, gawa ma merie.
NTA KA O BIRI NA SITE, E KP BLRIN AKWOTKWỌ ECHICHE, K BLR BY ỌZỌ INS ỌZỌ, KPDR BY IWU JOSTHURTING, ZO EZO IWU, N’EZIOKWU, N’IHI NA AMAGH I M. ND OL ỌR OL ATBY OLYMPIC NA-AD D DEL-DOP, NA DELD-DOP ​​UGBU A NA-EBU N'OBI N'IHU G.. O wute, YOU GAGHOT ATB OL Egwuregwu OLYMPIC NA ỌR YOUR unu, Ọsọ gị, 100 Mita.
MA Enwere ohere, ma ị nwekwara ike ịga na nkà mmụta okpukpe na ikere òkè na ezumike. You nwere olile anya maka ya? YOU NA-EME YOU NA-AH YOU N’OGE A? >> UGBU A M na-etinye oge m na ike n'ime ihe m ga-etinye na iji gwọọ onwe m. Ọ B IFR IF na m nwee ike inweta ngọzi a, m ga-enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ọ bụghị, M ga-eche naanị m ugbu a. >> KN maara ihe ozi gị ga-abụ ndị na-eche na nke a gbasara ya? NA ND YOUR GI,, MAARA Onye hụrụ gị n'anya wee nwee obi ụtọ na arụmọrụ ya ma nwee ike gwepịa dị ka ha dị n'oge a.
G WHATN W KA YOU GA-ACHỌ AYZỌ HA? >> Achọrọ m ịsị ndị na-egwu egwu m na ndị ezinụlọ m na ndị na-akwado m, KPỌR TO ND H NA-EKPỌTA, M GA-ACH TO TOB.. KA M KWURU. AMAGARA M, MGBE M NA-ACHỌ, M NA-ECHI N’onwe m, ANA N’AGPUTA ỌH COM ỌH THATR THAT NA-Egosi NA-AMASIG EH ANDNANYA NA HA NILE, ANA M ECHE N’AD EV ONYE Ọ B ANDLA M NA-EWERE M N’AGHAGH OR MARA MA Ọ B TO MARA OT CON M GA-ECHI EGWU M N’ BYGW MY. EKPERE N’OGE A.
NA A - NA Ọ B IFR I na mụ na ndị enyi m pụọ, ma ọ bụ na m ga-achọ ka a hụ m taa na ụnyaahụ, abụ m mmadụ. ANY ARE B PEOPLE ND PEOPLE. Ajụjụ ọnụ m, m ga-achọ ịjụ ajụjụ ọnụ m ajụjụ ọnụ, ma ọ dị mma ma ọ bụ ihe ọjọọ, ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, TOSHA'CARRI RICHARDSON, NA-AD NEGH L M AH - - TBỌCH THE AHA HA'CARRI RICHARDSON. Gwa onye ka o mee.
Adịghị m KWU OH, Emela ihe ọ bụla MA Ọ B IF Ọ BOR YOU na ị na-ahọrọ ya na-eme ihe na oge gị ma ọ bụ nke mere na ị kwesịrị ịma, mara na-eso ma ọ bụ nanị ụzọ dị iche iche iji chọpụta ihe ọ bụla kacha mma m ga-eche AMHUMAN. Abu M Gi, M na-agba oso obere oso. A GA-EBU ND PEOPLE NA-AKW SOMKWỌ AH THEY NA HA NA-A UAGH ANDGH AND M Agaghị akpọ ha asị.
Ọ B IFR YOU NA WAN H TOROSE CHH CHNANYA MGBE M KWURU Ihe m nyere ma gosipụta, ọ bụ naanị gị, omume gị, ị ga-atụkwasịkwa ya obi. MA Enwere m obi ụtọ na m nwere ike ịkọwa akụkụ nke akụkọ a, Ezinụlọ M, Nkwado m na ịkpọasị, M na-ewute ọ bụrụ na anaghị m eme ya, na m chọrọ ịmata nke a ga-abụ oge ikpeazụ egwuregwu egwuregwu anaghị aghọ aghụghọ. 'CARRI RICHARDSON NA nke a ga-abụ oge ikpeazụ ndị USDOENS B DONGH WITH B H N'WITHLỌ AKW HKWỌ AKW HKWỌ AKWOLDKWỌ ọla edo - B UP N'UPLỌ M. >> SHA'CARRI, M - AH L KA MERE NA-ECHE NA - M NA-ECHE NA G YOU NA THEB H NA OWB THATROW YOU GA-EME.
NRU Gị BUE Eziokwu. Unu niile ejirila ikike unu rụọ ọrụ unu, ma tinyekwa na okwu unu. I MERE NILE N’ WENY WE NA ANY WHAT KWES WHATR WHAT IHE NA-EME NA Mkpebi a.
KAMA YOU NA-AKA N’AKA TO NA-AGA? KEDU? >> EE. Nke a bụ nanị egwuregwu. Abụ m 21.
Adị m nnọọ afọ ojuju. N'adịghị ka ọtụtụ, enwere m ọtụtụ egwuregwu n'ime m ịsọ mpi na enwere m ọtụtụ talent na-akwado m n'ihi na ihe niile m na-eme bụ MENATURAL, NO STEROID, OR Ọ BYLA. Ihe a mere gbasara MARIJUANA, NT AFR AF MFE Ọ B IF Ọ B IF Ọ B YOUR SAN AB SANTA, M ga-alaghachi ọzọ na ikike ịsọ mpi na ihe niile.
Oge ọzọ m ga-anọ na egwu egwu a, M dị njikere maka ụlọ ọrụ niile na-atụ egwu na-abịa ma nweta ihe ị chọrọ - >> SHA'CARRI RICHARDSON, Ọ B ANGH M ỌR E MGBE MA Ọ B B
Ebee ka agba nke abụọ nke Tour de France?
N'isiokwu a, m ga-egosi gị otu ị ga - esi soro Tour de France bi na ọwa n'efu site na ebe ọ bụla n'ụwa. Iji lelee Tour de France dị ndụ, anyị na-eji ITV Hub, nke bụ ọrụ nkwanye si ITV, onye mgbasa ozi telivishọn UK.
M mepụtara akaụntụ tupu oge eruo. M ga-jikọọ. Ọ dị mma, ejikọrọ m ugbu a.
Ma dịka ị pụrụ ịhụ, enweghị m ohere ịnweta ọdịnaya ahụ. Nke a bụ ihe anyị na - akpọ geo-blocking webụsaịtị ahụchọpụtara adreesị IP nke m ma na - egbochi ịnweta iyi ahụ.
Ihe ndị ITV gosipụtara na-abụkarị ndị bi na UK, mana enwere aghụghọ iji gafee geo-blocking a ma lelee njem njem Tour de France site na ebe ọ bụla n'ụwa. Tupu m egosiputa gị otu esi ekiri Tour de France na ITV, a na m akpọ gị oku ịmasị isiokwu a, denye aha na ọwa anyị ma pịa bọtịnụ ngosi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọdịnaya anyị. Nke a ga-apụta ọtụtụ ihe nye anyị ma nyere anyị aka ịmepụta ọdịnaya bara uru karị.
Kedụ ka ị ga - esi lelee ITV na mpụga UK? Ọfọn, ị nwere ike ịgafe ngọngọ ahụ na ExpressVPN n'ụzọ dị mfe. ExpressVPN bụ ngwa ị nwere ike iwunye na kọmputa gị, ama, mbadamba ma ọ bụ smart TV na nke na-enye gị ohere ịgbanwe adreesị IP gị. Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ UK na ndepụta mba iji mebie njikọ sitere na mba ahụ ma yabụ na ị nwere adreesị IP UK.
M pịa abụọ. Ọ ga - jikọọ
Ọ ga-ewe naanị sekọnd ole na ole. Emeela, abụrụ m ugbu a na ịntanetị si UK. Ejirila adreesị IP nke IP nkesa na Docklands dochie ya.
Ana m enye ume ọhụrụ peeji
M pịa igwu egwu, ka anyị gaa, enwere m ohere iyi nke dị mma bụ enweghị ịla azụ, enweghị nkwụsị, Tour de France amalitebeghị ma ugbu a ị mara otu esi enweta iyi ahụ.
ExpressVPN bụ VPN kachasị mma maka ịgbanye na ihe karịrị 3000 sava na mba 94. Ọ bụ nchekwa, ntụkwasị obi, na ngwa ngwa VPN dị maka Windows, macOS, iOS, Android, wdg. Ọ dịkwa na Smart TV.
Mụ onwe m na-eji ya na gam akporo TV. Egosiri m gị otu esi eme ya na kọmputa, mana ọ bụ otu ụkpụrụ ahụ ma ọ bụrụ na ị na-eji ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Ngwa iOS na gam akporo yitere ngwa a.
ExpressVPN na-enye nkwa ịkwụ ụgwọ ụbọchị 30, nke pụtara na ị nwere ike ịdebanye aha, jiri ọrụ ahụ ruo ọtụtụ izu (oge zuru ezu iji nweta Tour de France) wee rịọ nkwụghachi ma ọ bụrụ na achọrọ. Ya mere, ị nwere ike ilele usoro niile nke Tour de France na ITV Hub wee rịọ maka nkwụghachi. N’ikpeazụ, ị kwụghị ihe ọ bụla.
Agbanyeghị, ana m akwado ka ị debe ndenye aha gị ka ExpressVPN nwere ọtụtụ uru ndị ọzọ. Na ExpressVPN, ị nwere ike ịlele ọwa TV ọ bụla n'akụkụ ụwa. Ọwa TV nke Britain, kamakwa ọwa TV nke America, ọwa Australia TV, ọwa TV nke Canada, ọwa TV ndị France, wdg na ụwa niile.
Ihe ị ga - eme bụ ịhọrọ obodo onye mgbasa ozi dị mkpa na ndepụta a. I nwere echiche
Ezigbo ihe ọzọ maka ITV bụ SBS, onye mgbasa ozi telivishọn nke Australia. SBS bụ onye mgbasa ozi gọọmentị nke Tour de France na Australia. Naanị họrọ Australia site na ndepụta nke mba wee gaa sbs.com.au/ondemand Ọ bụrụ na ị ga - elele Tour de France na nkọwa French, ị nwere ike ile ya na France.TV, ọrụ ntanetị si France Télévisions, a free ọwa telivishọn France.
Dịka ị pụrụ ịhụ ebe a, ha na-agbasa mgbasa ozi Tour de France. Naanị họrọ France na ndepụta nke mba, wee gaa France.TV ma mepụta akaụntụ efu.
Nwere ike ịgbaso njem egwuregwu de de France na nkọwa French. Na ExpressVPN ị nwere ike ịlele ọtụtụ ọwa ndị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ gụnyere RTBF, ụlọ ọrụ TV nke Belgium nke na-agbasa Tour de France na agbụrụ ndị ọzọ na-agba ịnyịnya, yana egwuregwu Euro 2020 niile, Formula 1 Grand Prix niile ị ga-ahọrọ Belgium ebe a .
Ọwa ndị a niile bụ ọwa n'efu nke ị nwere ike ịlele na ntanetị maka ExpressVPN, na nchịkọta echiche a bụ iji ExpressVPN iji mepụta njikọ sitere na UK site na dochie adreesị IP gị na adreesị IP UK.
Nke a ga - eme ka ITV Hub chee na ị sitere na UK wee nye gị ohere ilele Tour de France ka ọ dị ka ị nọ na UK. Ọ dị mfe. N'aka nke ọzọ, lee ya na SBS, France TV ma ọ bụ RTBF.
ExpressVPN na-enye ọtụtụ uru ndị ọzọ: Nweta akwụkwọ ndekọ aha ndị ọzọ nke Netflix. Netflix USA, Netflix Canada, Netflix Japan
Nweta ọtụtụ ihe nkiri na usoro Ihe ngosi anaghị adị na mba gị. Chọgharịa ma budata na-enweghị aha. Iji nweta ebe nrụọrụ weebụ egbochiri site na ngwaọrụ ọ bụla, zụta tiketi ụgbọ elu dị ọnụ ala na ọtụtụ ndị ọzọ.
Echekwala banyere VPN n'efu. Otu n'ime ndị a agaghị ekwe ka ịmekọrịta njikọ sitere na UK, Australia, France ma ọ bụ Belgium. I nweghi ike ilele Tour de France na ITV Hub, SBS On Demand, France.TV ma obu RTBF Auvio jiri VPN n'efu.
ere ịgba ígwè
Free VPNs dịkwa nwayọ nwayọ ma anaghị enye bandwidth a na-akparaghị ókè. Kama, ikwesiri iji ohere ikpe nke ExpressVPN nyere. Ọ dị mma, nke ahụ bụ maka taa! Ugbu a ịmara otu esi ekiri Tour de France na-ebi na ọwa n'efu, n'agbanyeghị ebe ị nọ n'ụwa
Dị ka ị hụworo, ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịjụ ha n'okpuru ma m ga-aza gị ozugbo enwere ike. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị ma ọ bụ hụ na ọ bara uru, biko nwee mmasị na denye aha na ọwa ahụ.
Ebee ka Tour de France na-amalite 2020?
Ndị na-agba ịnyịnya 180 were mmalite nkeogbo 2na Perros-Guirec na 13.22.June 27. 2021
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, Tour de France bụ ihe omume ịgba ịnyịnya ígwè kasị ukwuu nke oge ahụ, nke a na-eme na July. Na njem ahụ, ndị na-agba ịnyịnya kachasị mma n'ụwa na-asọ mpi iri abụọ na otu gafee France maka ọnụahịa kachasị na ịgba ịnyịnya ígwè, izu atọ nke ịgba ọsọ dị iche iche kwa ụbọchị na ọtụtụ agba agba dị iche iche siri ike idobe, yabụ anyị ga-agbaji ya. na ntuziaka onye mbido a na Tour de Frost Gịnị bụ njem ahụ? The Tour de France bụ otu n'ime atọ nnukwu igwe kwụ otu ebe njegharị na ọ bụ? agbụrụ kachasị ewu ewu na kalenda enweghị ajụjụ dị ka onye nyere onyinye njegharị de France nwere 21 nkebi nke ọ bụla gbasaa karịa izu atọ ugbu a, usoro ọ bụla agbatịwo, onye ndu agbụrụ ahụ na onye mmeri zuru oke kpebisiri ike na a ga-atụle oge ngagharị. na mgbakwunye na ogo n'ozuzu dị ka nhazi ọkwa n'ozuzu ma ọ bụ gcas a na-akpọkarị ya dị ka onye mbụ ga-agba ọsọ na ọkwa ọ bụla ịbụ onye mmeri. Ọ na-agakarị ụbọchị abụọ ezumike na enweghị ịgba ọsọ, n'agbanyeghị na ndị na-agba ịnyịnya na-apụ ma mee ikpere iji mee ka ụkwụ ha na-agagharị, mana ha na-ewepụ ụbọchị ndị a iji hụ na ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ezumike, yabụ ị nwere ike ịgba ọsọ dị ka o kwere mee ụbọchị ndị na-abịanụ iji mee ka agbụrụ ahụ bụrụ nke na-atọ ụtọ dịka o kwere mee.
Njegharị ahụ na-agba kemgbe 1903 na naanị nkwụsịtụ site na Agha Iwa Mbụ na II, na-eme ka agbụrụ 2020 107 malite na mba agbata obi dị ka Belgium, Netherlands, Great Britain na ebe ndị ọzọ, ugbu a, usoro izizi nke agbụrụ ahụ na-ewerekarị na mba ahụ, mana ha na-aga France maka mmalite a maara dị ka Grand Departall, yabụ njem nke Tour de France dabara na otu ụzọ ise dị iche iche ọkwa nke mbụ ọkwa ndị a na-enwekarị obere mmasị ma jiri ya gbaa ọsọ n'etiti megharia ugwu di iche-iche gafee ime obodo French, ugbua ndi okacha amara nke anyi na-akpo ndi okacha amara meriri, ndi n’aru oso kariri 70km kwa awa, mgbe ha na-agba oso gaa n’isi njedebe n’ebe di oso-agha, mgbe ahu anyi nwere ugwu ugwu. , ugbu a, ugwu nke njem ahụ bụ ihe omume bụ isi na akụkụ nke agbụrụ ahụ, nke onye ọ bụla chọrọ ịbụ akụkụ nke ndị na-ekiri ya na ndị agbụrụ ndị a na-agbasa usoro ndị a n'etiti ugwu France na pyrenees na ndị a nkebi ugwu ọtụtụ puku mita nke ịrị izu atọ i nwere ike ma na-ejedebe na a ibu ugwu elu ugwu dị ka nzuko mbata ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe a ogologo eriri rịdata mgbe a oké ịrị ndị a nkebi mgbe niile na-akpali akpali ma na ha na-a na nnukwu mkpebi. n'ozuzu oge ikpe ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri njem njem nke France ị ga-abụ ezigbo oge ikpe a na-akpọ na-agba ọsọ megide elekere, n'ihi na ọ bụ mgbalị mmadụ n'otu oge nke ọ bụla ọkwọ ụgbọala na obere oge nke otu nkeji n'otu oge , Ndị na-agba ịnyịnya na-ejikarị ịnyịnya ígwè pụrụ iche na akụrụngwa na-aga ngwa ngwa dị ka o kwere mee na ọsọ ha. Oge ọnwụnwa nwere ike ime na mpaghara ọ bụla, site na egwu ndị dị larịị ruo ebe dị egwu na ọbụlagodi ugwu dị ọcha na-enye ohere dị ukwuu maka ọkwa zuru oke iji tinye oge dị ukwuu na ndị asọmpi. A na-anwale ule oge otu n'otu usoro ahụ dị ka ọnwụnwa nke oge ọ bụla, mana ndị otu ahụ na-agba ha ugbu a otu ọ bụla na-apụ ma na-agbagharị na nhazi usoro, were ya na nnụnụ na-akwaga n'ụdị V a buru ibu, nke a na-enyere aka imebi ifufe ma debe ya ije ije dị elu dị ka ndị ọrụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee.
Ugbu a ndị otu niile na-amalitekọ ọnụ na oge ikpeazụ enyere enyere bụ onye na-agba nke ise gafere akara ngwụcha, mana ha na-ebukarị mmadụ asatọ agba. Ya mere, mgbe ha nwere ndị ọkwọ ụgbọala asatọ ma ewepu atọ nke ahụ bụ ise, yabụ ha na-enwekarị ndị ọkwọ ụgbọala atọ na-eme ihe ha nwere ike. Anyị na-atụgharị Calla gburugburu ma na-ere ọkụ nke ọma, ha ga-aga nke miri emi ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịhapụ nso na njedebe, ịhapụ ndị ọzọ ka ha gaa n'ihu na-enweghị ha, ndị na-agba ịnyịnya a na-agagharịkarị n'ụzọ nke ha iji chụọ otu ha Onye ndu, ugbua ikpe otu oge, ọ bụrụ na emee nke ọma, ọ dị ka igwe mmanụ nwere mmanụ nwere nnukwu uru karịa ndị ọzọ, na-agbaso ụdị mmemme a, onye mmeri niile nke Tour de France bụ otu onye na-agba ịnyịnya nwere oge kachasị dị ala. na njedebe nke 21st, nke kwụsịrị na akara ngosi Champs-Elysees na Paris kemgbe 1975, nnukwu ìgwè ndị na-agba ịnyịnya nọ na njem a maara dị ka Peloton thepelotonis nwere ìgwè 22 nke ndị ọkwọ ụgbọala asatọ, nke nke ọ bụla rụpụtara na 176 ọkwọ ụgbọala na mmalite.
Otu ọ bụla nwere ndị ịgba ịnyịnya kachasị mma nke mejupụtara onye bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè kwa afọ. Ndi otu abuo a gunyere otu ndi otu Top Animal World Tour na ndi otu ndi otu aka ndi ozo. Ndị otu Procontinental na-enwe ndị na-abata abata ma na-abia, ma a na-ewere ha dị obere, ọ bụ ezie na ndị otu Superbig nwere ohere dị mma maka ndị otu ndị otu mpaghara iji gosipụta ndị na-akwado ha n'ọsọ kachasị oge, na-asọmpi Bigworld Tour Ndị otu egwuregwu nwere ike ịdọta ndị na - agụsị akwụkwọ na - achọ ịdebanye aha ha maka njegharị ụwa na oge na - abịanụ ga - abụ ndị ọkwọ ụgbọ ala na - eme ka agbụrụ ahụ dị na breakaways iji nyekwuo ndị na - akwado ha ohere, ka o kwere mee, ugbu a ndị otu ga-elekwasị anya na otu ndị ọkwọ ụgbọala abụọ ma ọ bụ abụọ a họpụtara dị ka ndị isi otu egwuregwu ga-achọ onye ọ bụla iji merie nkebi ma ọ bụ onye ndenye ọkwa zuru oke nke ebumnuche ya bụ imeri Tour de France na Isi yana onye ndu ndị ọzọ. mejupụtara domestiques, nke pụtara n'ụzọ nkịtị ndị ohu ugbu a domestiques kwadoo ndị isi otu ha, ịchụ ohere nke ndu ha na iji nyere ndị otu aka ieve Toredomestiq ndị mmadụ na-agakarị n'isi otu ahụ, iji belata ije ọgụ ọgụ belata nwayọ na-echebe onye ndu site na ifufe nnoo iji chekwaa ikike onye ndu a na-eche na ndị obodo ga-alaghachikwa n'ụgbọ ala otu ịnakọta nri iji nata iwu iji nweta karama uwe maka ndị ndu ha, ọ bụrụ na onye ndu gị nwere mgbapu n'akụkụ okporo ụzọ ebe ụgbọ ala gị na-enweghị ike iru gị, na-enye gị igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe nke gị iji mee ka ị laghachi n'ọsọ ọsọ ọsọ ozugbo n'oge nke ọ bụla nwere naanị otu onye mmeri ma ọ bụ naanị otu ọkwọ ụgbọala meriri njegharị a na ngụkọta mmeri ndị a dị na tad ellos teamwork nke ndị otu egwuregwu asatọ niile, ọ dịghị onye nwere ike imeri njegharị de france naanị ọ gaghị ekwe omume ilu ochie ahụ. imekọ ihe ọnụ na-eme ka nrọ ahụ nwee ihe ịga nke ọma na njem ahụ bụ ihe ngosi mara mma nke dị iche iche nke na-agbagharị site na France nke a ngwakọta nke uwe ndị na-eto eto nke ndị na-akwado nkwado -logos na-atọ ụtọ na agba agba bụ n'ezie a Lee n'okpuru niile regular ga - ahụ uwe dị mkpa anọ dị mkpa nke enyere onye isi nke otu ọkwa ọkwa anọ dị na njedebe nke ọkwa ọ bụla Yellow jes Le Le Mayo Jean bụ isi na nke kachasị mkpa jersey nke ndị na-agba ịnyịnya Tour de France nwere obere oge a kwakọbara n'oge ọ bụla, uwe ahụ nwere agba odo, ekele maka akwụkwọ akụkọ French Auto, nke mbụ kwalitere agbụrụ ahụ na mbido narị afọ nke 20 ọ bipụtara na akwụkwọ edo edo edoghị anya ugbu a onye ọ bụla yi a jersey na njedebe nke ogbo 21 na-enweta Tour de France niile n'oge nkwanye ùgwù site n'aka ndị ọgbọ na ndị na-akwado ya ma jiri ego nrite nke 500,000 euro onye na-acha ọcha ọcha Mile Block na-acha ọcha jersey na-egosi onye ọkwọ ụgbọala kacha mma na agbụrụ a Ọ bụrụ na onye ọkwọ ụgbọala kachasị mma na njedebe zuru ezu bụ onye mbụ nwere ike iyi uwe na-acha odo odo n'okpuru Jenụwarị 25th na afọ ịgba ọsọ na agba ọcha na s ame oge, na nke a na-edozi agba odo ugbu a, mgbe ahụ ebe nke abụọ maka ndị na-eto eto na-agba ọsọ n'ogologo na-eyi akwa ọcha na njedebe nke njem ahụ onye na-eto eto kachasị mma na-ewe ụlọ euro 20,000 Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahụ a na-akpọ Lumaio ver bụ onye na-agba ọsọ jersey ofụri race A na-enye ihe maka onye ọkwọ ụgbọ ala mbụ ịgafe akara, agbanyeghị, a na-enye ihe ndị dịnụ kwa ụbọchị ihe ndị dịnụ dịgasị iche dabere na ụbọchị ụbọchị.
Na mgbakwunye na isi okwu ndị a, ụzọ nke ụbọchị ọ bụla dị spic kt nwere ihe a na-akpọ agbatị dị n'etiti nke na-abịa tupu akara, agbụrụ ahụ ka na-atọ ụtọ. Malite-n'isi Sprint ihe na-ọdịda ihe ma na etiti sprints na na n'isi sprints na onye na-akwọ na kasị ihe na njedebe nke agbụrụ na-eyi na-acha akwụkwọ ndụ jersey now Jersey -enwetakarị merie ma ọ bụ eyi site na onye na-agba ọsọ na-anakọta ihe mgbe ọ meriri Nzọụkwụ ma na-ejedebe mgbe niile n'elu 15 na nkebi ọ naghị emeri na nke ugwu dị elu na-alụ ọgụ maka ndị na-apụ apụ ị nwere ike ịchekwa sprints dị n'etiti ọbụna na ụbọchị ebe ha na-enweghị ohere nke mmeri Ọnụahịa nke onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ puku iri abụọ na ise euro, dotted jersey la moi poirous, n'ụzọ yiri nke ahụ maka ndị enyi nke usoro nke etiti, na elu nke isi isi ọ bụla maka ndị na-agba ịnyịnya ole na ole iji ruo n'elu, ọnụ ọgụgụ nke ndị dịnụ Ihe dịgasị iche dabere na nhazi nke nrịgoro nke siri ike na mgbago ugwu dịkarịa ala o nyere ihe ndị ọzọ Onye ọkwọ ụgbọ ala nwere isi ugwu kachasị elu na-eyi uwe na-enweghị ntụpọ ma were 25,000 euro n'ụlọ ya na njedebe nke njem ahụ. Ka anyị kwuo maka ndị na-agba ọsọ Sprinters na-achọkarị imeri ọkwa dị larịị na-echebe onwe ha pụọ ​​na ifufe n'azụ ndị otu egwuregwu ụbọchị niile na-anwa ịnọ n'akụkụ elu na-ezere nsogbu na-ezere mgbawa site na ngalaba teknụzụ na-ezere mgbanwe mgbanwe ikuku na-akụ ụdị ihe niile sprinters n'ụzọ nkịtị mana mgbe ha kwara ụta. emetụla ifufe aka mgbe ọ bụla, ha na-ezobe n'ihu peloton ruo otu narị mita gara aga, ebe ha na-apụ n'azụ ndị otu ha nyere ha nnukwu ụzọ iji mebie mmeri ahụ ka ha wee nwee ike ịgbaru ihe mgbaru ọsọ ahụ , ndị na-agba ọsọ nwere ike ịmepụta ọtụtụ ike ọbụlagodi obere oge ma ha dị oke ọsọ.
Bụ onye na-agba ọsọ bụ ọrụ pụrụ iche ma dị egwu otu nkọwa ahụ na njedebe nke njem ahụ na-agba ọsọ tendenzie ll awa n'azụ ndị mmeri niile n'ogologo niile, ọ bụ ezie na ị nwere ike merie ọtụtụ ọkwa n'akụkụ ugwu ugwu ndị meriri ndị ọkachamara na-arịgo elu. Ndị na-agba ịnyịnya a na-arụ ọrụ n'ịrịgogo ma ha na-eme ngwa ngwa na-abụkarị ndị na-agba ịnyịnya na-achọ iji merie njegharị ahụ mana agbụrụ ahụ nwekwara ndị na-arị elu ndị na-enweghị mmasị na uwe na-acha odo odo.Ha nwere naanị ebumnuche dị ọcha nke mmeri nzuko nzuko na ugwu. onye na-agba ịnyịnya chọrọ mmeri njem ahụ n'ozuzu ya nwere ike ịrị ugwu nke ọma, yana ikike nwere ike ịmepụta oke oghere na njikọ ahụ ma hapụ ka ndị asọmpi ha tufuo oge dị ukwuu na nhazi zuru oke n'otu. daa ada mgbe ọnwụnwa nke oge ọ bụla dị mkpa kachasị mkpa n'ọsọ egwuregwu ebe a ga-enwe ọ dịkarịa ala otu ugboro kwa mbipụta nke tour de France, mana ụfọdụ na-agbakwunye abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ bụ karịa ọtụtụ ndị isi otu egwuregwu Ndị meriri n'ogo m chọrọ n'ogologo ga - enwe ike iwepụta nnwale oge ọfụma oge ikpe na - adịkarị site na nkeji iri atọ rue elekere ma ndị na - agba ịnyịnya nwere ikike iji merie nkeji tupu ndị ha na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na ha dị ezigbo mma Imeri onye obula banyere oge ikpe nwere ike inwe uru karie ndi Agc nke na akwadoro ngwa ngwa ịrị ugwu iji nweta oge ugbu a na mgbakwunye oge ikpe na-enye onyinye oge ubochi maka ndi nke ato mbu n’agha. ahịrị were sekọnd isii na anọ maka nke mbụ, nke abụọ na nke atọ ebe ndị nwanyị na-eme njem de France Closest bụ peloton ụmụ nwanyị Nnukwu njem izu atọ na-eme na Girorosa, agba ọsọ ụbọchị 10 nke na-amalitekarị na July ụlọ ọrụ na-ahazi nchebe njegharị na-ahazikwa le tour defrancea nwanyị otu ụbọchị agbụrụ n, nke emere na otu ụzọ dị ka ogbo nke agbụrụ ndị nwoke ọtụtụ afọ.
Nke a bụ ụzọ dị larịị n'akụkụ champs-elyseesin paris nke ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-echekarị na anyị niile kwenyere na ezigbo ụmụ nwanyị-la tour de france ga-agbanwe ihu ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya igwe ruo mgbe ebighi ebi ma bụrụkwa nnukwu ụzọ iji egwuregwu na-adabaghị adaba ma n'onwe m amaara m na ọ ga-abụ ihe ịtụnanya inwe ike ịhụ nke a wee bie ndụ dị mma enwere m ihie ụzọ nke kedu ka m si hụ nke a - ebe kachasị amasị anyị ileta ndị njem na n'ezie agbụrụ gcn gafere mana enwere ike anyi nwere ezi obi ma ma e wezụga njem anyị nwere ọtụtụ agbụrụ ndị ọzọ dị ukwuu kwa afọ mana gcn dị ọhụụ? Race Pass nwere ihe niile ịchọrọ, ọ nwere ụdị atụmatụ dị iche iche dị ka profaịlụ ọkwa, ndepụta mmalite, ihe ngosi kwa ụbọchị mgbe nyocha agbụrụ na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ, ọ nwere ezigbo ihe niile ịchọrọ, ma ị bụ onye na-ekiri ekiri ma ọ bụ a oge mbụ fanatic a igwe kwụ otu ebe bụ na nke ahụ bụ ya tour de francethe nnukwu show isi ihe omume n'ụzọ nkịtị nnukwu ihe omume nke afọ na ịgba ígwè ụwa na njem bụ a oké mmalite ma ọ bụrụ na ị hụtụbeghị agbụrụ agbụrụ tupu ma ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye anyị ume ma ọ bụrụ na ị maara onye na-abanye ugbu a na ịgba ịnyịnya ígwè ma nwee ike ịchọ ịmata agbụrụ agbụrụ na njegharị. Zitere ha edemede a ka ha wee nwee ọ excitedụ, ekele maka ikiri na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ
Ndi Peter Sagan ke Tour de France 2021?
Ihe160km ogbosite naNjegharị na Chateauroux bụSagan siThbọchị agbụrụ 50thnke 2021mgbe na-agba ịnyịnyaiheTụgharịad'Italia, ebe o meriri ogbo naiheacha achala acha odo odo7 ụbọchị gara aga
Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-enwe ihe ịga nke ọma na ịrịgo ahụ, ndị ọzọ na-eche ka ụmụ ala ahụ nweta oke nke ama ha. Ọ bụ ohere maka ahụ iji gbakee, mana oge eruola ka uche rụọ ọrụ. Usoro nloghachi ihe ize ndụ nke chọrọ nyocha, ngụkọta oge na ịkọ amụma.
Ihe nkedo nkewa nke abụọ zuru oke iji tufuo gị na nsọtụ otu ụzọ ndị ahụ na-awụ ugwu ugwu. N’isiokwu a, anyị ga-eleba anya n’ụfọdụ ndị nwere ezigbo bekee n’ịgba ịnyịnya ígwè n’ịgba bọl ọkachamara ma chọpụta ụfọdụ usoro ha na-eji. Dodata abụrụla ọrụ dị mkpa nye ndị ọkachamara ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ.
Enwere ike inwe mmeri ma ọ bụ furu efu na ọdịda Peter Sagan's Super-Tuck na 2015 World Championship nyere ya aha ụwa naanị lelee anya dị n'etiti ya na ndị na-achụ ya tupu ọdịda ahụ ma jiri ya tụnyere mgbe ọ kụrụ ala mgbe ọ nọ naanị otu onye na-akụghị na brek na akụkụ. Ọ bụ ihe dị ize ndụ, mana ọ kwụrụ ụgwọ na njedebe. Super-tuck ghọrọ onye ama ama n’afọ iri gara aga ma ọ bụ karịa, mana ọ malitere n’ọgbọ tupu nke ahụ.
E mepụtara ọtụtụ ụzọ dị iche iche na 90s, ụfọdụ bụ ndị okike dị ka ụdị Marco Pantani a ma ama. Rịba ama otú o si ebu ibu ya n'azụ ụkwụ ka afọ ya na-adịkwasị n'elu sadulu. Nke a na-eme ka nkwụsi ike zuru oke.
Ebumnuche ọpụpụ ka ebuso agha ma onweghị onye mere nke ọma karịa Paolo Savoldelli, onye kpọrọ Falcon maka ụzọ o si agbadata. Ọ meriri njem nke Italytali na 2005 ekele maka ọkwa ya dị ala. Mgbe ndị na-emegide ya hapụrụ ya n'azụ otu ugwu ahụ na-ebute nsogbu ọ na-etinye isi ya n'ihe niile, o juru ha anya na ọ jidere ha na ọdịda ahụ ma debe uwe ojii ya ruo mgbe ngwụcha nke njem ahụ dị ukwuu, ewezuga ugwu ahụ. na Na oge ikpe, nke a nwere ike bụrụ mmeri Froome kachasị pụọ na Tour, maka etu o siri mee ya.
Unusualdị ya na-adịghị ahụkebe dọtara uche ndị mmadụ wee bụrụ onye ama ama na soshal midia, mana ọ ga-eju gị anya ịnụ na ọ gaara ije ọtụtụ ọsọ ọsọ ma ọ bụrụ na ọ jiri ụdị ndị ọzọ. Ntughari ya emeghikwa ihe di iche, karia ime ka obi ya di elu. Oghere nke 13-nke abụọ ọ meriri na ogbo ga-abawanye karịa otu nkeji ma ọ bụrụ na ọ jiri ụdị ọkpọ ụzọ Peter Sagan.
Nke a bụ nkwubi okwu ndị otu ndị nkuzi Belgium na-eru n’afọ 2017. Ha jiri ọkwa dị iche iche tụnyere ọwa mmiri site na iji tunnels ifufe na mebere anwale. Ha chọpụtara na ọnọdụ Chris Froome bụ 9% ọsọ ọsọ karịa ọnọdụ ịnya ụgbọ ala nkịtị, mana ọ na-ada n'azu ọnọdụ azụ azụ nke ejiri 12% ngwa ngwa.
Pantani tụgharịrị bụrụ ngwa ngwa, yana ndu nke 14%. Super-Tuck Sagan na-agbakwunye ha niile, na-enye ya ohere 17% karịa ọnọdụ ọ bụla. Agbanyeghị, ọdịda ahụ abụghị naanị maka oke ọsọ.
Chegodi ugboala di elu nke di mita ise zuru oke, na-agba oso di elu, ma gha ime uzo 90. Enwere ezigbo ohere ọ ga - akụtu. Ebe gwongworo mita atọ ga-aga n’enweghị nsogbu ọ bụla.
Otu ihe a metụtara igwe: ịbelata etiti ike ndọda na akụkụ ya na-enye gị nkwụsi ike ma nwekwuo ikuku. Fabian Cancellara gosipụtara nke a mgbe mgbanwụ ụkwụ gbanwere n'oge nke 7th nke Tour de France 2009. Spartacus na-acha odo odo na-achụ ndị isi otu azụ na ụzọ ala.
Phil Liggett: Eziokwu ahụ na ọ nweghị ndị otu ya na ya nọ ugbu a pụtara na nke a bụ mgbanwe na-agbanwe agbanwe na ọ nọghị na nsogbu ị nwere ike ịnụ opi ụgbọ ala na-afụ ka akwụkwọ ozi jaune de France na-agagharị na njem ahụ. azụ ubi nke peloton ma banye n'otu.
Atụla ụjọ, enweghị ndị otu, enweghị nsogbu. Ọ ghaghị ịnyagharị ọtụtụ ụgbọ ala na ọgba tum tum tupu ya alaghachi na peloton. Phil Liggett: tupu nke ahụ bụ ụgbọ ala dibia, chukwu m
Paul Sherwen: cheta, Cancellara bụ ezigbo aka njikwa.
Ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ile egwu nkà ya, ọ mejuputara ụfọdụ n'ime ya n'oge ikpe. A maara Italian shark Nibali maka njikwa ịnyịnya ígwè ya. Ozugbo ọ lara, mmadụ ole na ole nwere ike ijide ya.
Na Lombardia 2015, ọ malitere na ọpụpụ zuru oke ma meghee oghere na ndị na-emegide ya na ha ahụghị ya ọzọ. Mgbe ọ rutere nso ntutu isi, ọ na-alaghachi n'ọnọdụ ya maka ịchịkwa igwe kwụ otu ebe. Ọ mụtala usoro nkuku iji nweta ọtụtụ ụdị ụdị a.
Ọ na - etinye brekị nwayọ ma na - anya ala ebe ọ na - erute nso ahụ, ọ rute n’ọnọdụ elu ahụ wee malite ịgbalite ọzọ, na - enyocha ụzọ dị n’ihu ya ka ọ mara etu ọ ga - esi gafere n’ọzọ na - esote Ọ kwesịrị itinye uche na ya ebe ọ chọrọ ịga, na-ahọrọ ụzọ kachasị dị mkpụmkpụ n'okporo ụzọ. Ugbu a, anyị abanyela na ngalaba ị nwere ike ịnọ ebe a. Ndị otu a na-anya otu ọsọ n'otu akụkụ ugwu a ruo mgbe onye na-agba ịnyịnya kpebiri ịgbanwe n'ọnọdụ 'Superman' wee chụkwute ha.
Onye na-agba ịnyịnya ahụ agbasiela ike iji belata mpaghara ihu ya, wee belata esemokwu ikuku ma kwe ka ọ na-agba ọsọ ọsọ site na ike ndọda na ọdịda a. Ọsọ nke, na nke a, enweghị ike ị nweta site na ịregharị. Dị ka ọmụmụ anyị hụrụ na mbụ, onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike iwepu 24% ngwa ngwa n'ọnọdụ a karịa na ọnọdụ ịkwọ ụgbọala nkịtị.
Ndị mmadụ na-eleda ịdị mkpa nke aerodynamics na ịgba ígwè. Nke a clip gosiri otú a mgbanwe ọnọdụ na a igwe kwụ otu ebe nwere ike ime. Dị ka ndị mmadụ nwere mmasị ịhụ usoro ndị a na-arụ ọrụ, Super Tuck abụwo ihe na-ese okwu.
Fọdụ na-arụ ụka na mgbe ndị ọkachamara na-arụ ọrụ a, ọ nwere ike gbaa ndị na-eto eto na-enweghị ahụmịhe ime otu ihe ahụ n'okporo ụzọ ọha, nke nwere ike ibute nsonaazụ dị egwu. Na February 2021, òtù ndị na-agba ịnyịnya ígwè nke UCI nyere iwu machibidoro nnukwu-tuck na ihe ndị ọzọ yiri ya nke malitere na Eprel 1st.
Onye na-eyi uwe edo edo na Tour de France?
Pogacar merụrụ ihe na-akụda mmụọ n'ụbọchị mbụ nkeNjegharịna Alps na Sọnde (oge NZ), mgbe precocious kpakpando na-agba ịnyịnya ígwè na-ekwuacha odo odomgbe nkea mechara bụrụ nke asatọ na-emetụta onye ọ bụla. Pogacar malitere ụbọchị nkeji atọ, sekọnd 43 pụọ na isi nke Mathieu van der Poel.5 ụbọchị gara aga
Ogologo oge ole bụ Tour de France kwa ụbọchị?
NjegharịNdị na-agba ịnyịnya ígwè ga-emecha ihe karịrị kilomita 2,200 n'ime ụbọchị 23 na nanị ụbọchị abụọ ezumike. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ka na-agba awa abụọ ma ọ bụ atọ n'ụbọchị ezumike ndị ahụ. Nke ahụ bụ ihe karịrị otu narị afọ (otu narị kilomita)kwa ụbọchị.
Ego ole ka ịnyịnya ígwè Lance Armstrong na-eri?
Ejiri igwe aLance Armstrongna 2009 Tour de France agbụrụ. O wetara ihe $ 500,000 dị ịtụnanya na ụlọ ahịa Sotheby na-erite uru ebere, na-eme ya n'elu pop na ndepụta anyị kachasị ọnụ.anyịnya igwe.
Ego ole bụ njem ịnyịnya Tour de France?
Kedu ihe bụ njem Tour de France?
Afọ ole ka afọ aTour de France? Mkpokọtaebe dị anyanke agbụrụ bụ 3,414.4 kilomita - ma ọ bụ 2,121.6 kilomita na ego ochie.2 ụbọchị gara aga
Ogologo oge ole bụ Tour de France na France?
E meela ka ụbọchị 2021 Tour de France gaa otu izu iji zere nsogbu na asọmpi Tokyo nke 2021. 2021 ukara Tour de France ụzọ ụzọ (pịa maka nnukwu PDF mbipute) Ogologo ụzọ ịnyịnya: 3383km
Ebee ka ọkwa ọhụrụ dị na Tour de France?
Obodo 10 ọhụụ ma ọ bụ saịtị saịtị ga-apụta na maapụ nke 2021 Tour na ngụkọta nke 39: Ugwu Armorican ga-enweta bọl na-agba ọsọ ozugbo Grand Départ na Brittany. Ga - eso: Massif Central, Alps na Pyrenees.
Kedu otu ibu njem Tour de France na 2021?
E meela ka ụbọchị 2021 Tour de France gaa otu izu iji zere nsogbu na asọmpi Tokyo nke 2021. 2021 ukara Tour de France ụzọ ụzọ (pịa maka nnukwu PDF mbipute) Ogologo njem ịnyịnya: 3383km Ozi a kapịrị ọnụ na ọkwa ọ bụla na map ndị ọzọ zuru ezu na-ebipụtakwa na ntanetị kwa Mee na usoro mmemme agbụrụ.